Fivoriana lehibe ny olona: ahoana no mba hanambady vahiny am-pifaliana. fihaonana
Tsy izay rehetra sampa tsy ampy amin’ny teny vehivavy no tsara vintana azy manokana ny fiainana ao an-trano, fa izany tsy midika fa tsy maintsy mipetraka indray ary ny hiatrika manirery. Satria ianao mahita hatrany ny fomba mba ho faly, saingy tsy maintsy manao ezaka mba hanao izany. Ny vahaolana tsara ho handinika ny fahafahana mitazona ny andian ny fivoriana miaraka amin’ny olona monina any ivelany. Any Eoropa sy ny Royaume-uni, maro ireo solontenan’ny kokoa ny firaisana ara-nofo nofy ny hanambady vehivavy izay mijery toy ny sampa tsy ampy amin’ny teny endrika. Ireo sanda tsy ivelany tahirin-kevitra ihany, fa ny fahadiovam-po, ny hatsaram-panahy sy ny fitsitsiana, ny fahafahana mivory ny fotoana fotoana izao mba hiala amin’ny vadinao, kivy ny asa. Dia mora kokoa ny hihaona ny olona, ho an’ny fifandraisana matotra eo amin’ny toerana izay manolotra izany fanompoana izany. Raha toa ianao hamorona ny tsara ny portfolio amin’ny harena amin’ny fifamoivoizana avo, dia afaka mandamina ny lehibe fihaonana tamin’ny lehilahy manan-karena. Fa ny sainy dia mifantoka amin’ny anao, anao tokony hanaraka ny saina fanontaniana. Maro ireo fitsipika izay afaka hanampy anao mahasarika Eoropeana ny olona.
Tokony ho tsara toetra, tsara kokoa raha tsy retouching, ary avy eo ny mpampakatra afaka mianatra. Tokony hahita sary izay faly sy mitsiky, ny sasany amin’izy ireo dia tokony ho feno ny fitomboana. Sary manompo ny tanjona isan-karazany, mba tsy ny fahatsapana fa ianao dia miasa fotsiny na hialana sasatra taona rehetra manodidina. Izy ireo dia tokony hampiseho ny lafiny iray hafa ao amin’ny fiainanao. Avy namoaka sary tao amin’ny swimsuit, na dia bebe kokoa raha tsy misy izany, dia tsara kokoa ny kivy, ary koa ny lehibe fihaonana amin’ny vahiny ny olona izay tsy hita maso. Mazava ho azy, dia hisy maro ny hafatra, fa ny ankamaroan’izy ireo dia ho zava-betaveta. Ankoatra izany, dia tsy manaja ny zava-misy fa ny Eoropeana aza manolotra ny fanambadiana. Ho lehibe ny fihaonana tamin’ny olona izay tsy mbola nitranga, ianao dia tsy maintsy manoratra kely momba ny tenanao. Tsy maintsy milaza fa tsy dia tsara ny olona no tsy matahotra ny zava-tsarotra. Tokony hanoratra ny momba ny tiany, asa, asa, ary ny Fialam-boly. Ny andinin-teny tokony hahaliana sy ho mora mba hanoratra, kokoa ao madio malagasy. Raha efa nihaona tamin’ny lehilahy manan-karena, ho an’ny fifandraisana matotra, izany no tena zava-dehibe mba ho afaka ny hitazona ny fifandraisana. Izany dia ilaina ny mampiseho ny mety ho vadiny izay manana ny nofy ihany — dia ny fiainana mpiara — mamorona ny fianakaviana, ary tsy izany ihany any ivelany, mba hampisehoana ny maha-olom-pirenena, ary tsy dia efa misy zavatra izay ho farany. Tokony hiezaka isika mba hahalala ny olona isika dia miresaka ny tsara kokoa, noho izany dia tokony ho liana amin’ny ny fitondran-toetra tsara, tsy ny haben’ny kitapo.
Fanontaniana toy izany dia tena ilaina
izy ireo dia tsy mendrika, noho izany dia tsy mety ny mangataka azy ireo. Rehefa mety ho namana dia manomboka mampiseho ny fidiram-bola, dia tokony ho fampitandremana, toy ny manan-karena Eoropeana tsy hitondra tena toy izany. Ny manomboka ny fifandraisana amin’ny Eoropeana, dia tsy ho sahisahy ratsy, satria matetika ny olona avy any ivelany no antonony, azo ampiharina sy ny drafitry ny fiainana ho an’ny taona ho avy. Noho izany antony izany, dia ilaina ny ho matotra sy antonony momba ny olona izay tsy frivolous. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa manan-karena ny olona dia tena mampiahiahy. Tsy te-ho nalaim-baraka noho izany ireo fanontaniana rehetra ny vaovao. Fa nahoana ianao no tsy tokony handainga hanao ny»saron-tava». Ela na ho haingana, izany rehetra izany dia niely ela na ho haingana, ny mifanohitra amin’izany, dia tsy maintsy manome ny fahatsapana fa tsy misy olona tso-po izay dia mora mahatsapa ny sasany mari-pahaizana. Fa izany koa no tsy mendrika handeha lavitra loatra, toy ny olona mety hieritreritra fa izy dia tsy mahalala fomba sy vonona ny hanokatra ny voalohany ho avy. Izany dia tsy soso-kevitra mba hanao vy sy lady ny mpandàla ny maha-vehivavy azy ihany. Any Eoropa, efa ampy ny vehivavy toy izany, dia tsara kokoa mba asehoy ny tenanao ho maotina, mamy, mamy, teny. Ny olona mahatsapa toy ny knight izay tsy maintsy handresy ny fon’ny vehivavy tsara tarehy. Tandremo sao tsy mahita izany fahafahana sy halaim-panahy mba handresy azy io. Raha te hanambady olona avy any Eoropa, dia tsy maintsy mianatra bebe kokoa momba ny toe-tsain’ny olona izay izy no tompony. Izany dia hamonjy anao avy tsy an-kijanona ny dingana sy ny fanambarana. Ohatra, raha toa ianao hanoratra mialoha tamin’ny teny grika na espaniola, Dia mety mahazo valiny fa dia hitarika Anareo eo amin Ny fifandraisana sy ny manodidina. Miaraka amin’ny anarana sy ny anarana, na izany aza, ny fitaka dia tsy miasa, zara raha mamaly, andriamatoa, satria tsy mihevitra ny dingana voalohany tokony ho lehilahy. Izy koa mila mahafantatra bebe kokoa ny momba ny fomban-drazana sy ny fivavahana izay mety ho vadiny, no nanolo-tena. Azo inoana fa, izy ireo dia tsy maintsy hanova ny zavatra inoany. Raha izany dia tsy azo ekena ho anao, avy eo dia tokony ho safidy mikasika ny zom-pirenena sy ny fivavahana ny mpampakatra. Izany dia mba ho tsara ho fianarana ny teny fa ianao dia afaka miresaka momba ny hoavy vady, raha tsy izany ny fifandraisana aminy, rehefa afaka ny fanambadiana dia ho sarotra
← Tadiavo ny momba ny Fiarahana ao Zambia. Ny lehilahy mitady vehivavy amin'ny lahy sy ny vavy
Meksikana Mampiaraka Ny Fomba Fiarahana Soso-Kevitra →